YouTube, Facebook ကနေ Lives Video တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသနိုင်မယ့် InstaLively Livestreaming v1.1. Apk ~ ဘလော့ခရီးသည်
YouTube, Facebook ကနေ Lives Video တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသနိုင်မယ့် InstaLively Livestreaming v1.1. Apk
Android OS နှင့် Tablet ချစ်သူများ အတွက် YouTube, Facebook ကနေ Lives Video တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသနိုင်မယ့် InstaLively Livestreaming v1.1. Apk လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီ Lives Video တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် ပြသနေတာ များနေပြီ ။
သူငယ်ချင်းတွေလည်း မိမိ ဖုန်းထဲ့ကနေ YouTube, Facebook ကနေ Lives Video တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသနိုင်ဖို့ အတွက် ဒီ Application လေးကို ဆောင်ထားသင့်ပါပြီ။